Guddiga Doorashada oo Caawa War Culus soo saaray fariina u diray Mucaaradka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
27th January 2021 Ardaan Yare Af Soomaali 0
Guddiga hirgelinta Doorashada heer Federaal ayaa War cusub kasoo saaray Doorashada dalka ka dhaceysa sanadka 2021, xili weli khilaaf xoogan uu ka taagan yahay qabsoomida doorashada.
War-saxaafadeed kasoo baxay Guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in muhiim ay tahay in si deg deg ah xal buuxa looga gaaro isfaham darrada soo jiitantey ee hakisay in doorashadu ku bilaabato waqtigii loogu tala-galay.
Guddiga ayaa ugu baaqay Musharaxiinta Madaxweynaha in markasta ay ololahooda ku saleeyaan bed qabka, xasiloonida dalka iyo u turista shacabka Soomaaliyeed, xili Musharaxiinta ay kasoo horjeedan Guddigaan Qoraalka soo saaray.
Guddiga doorashada lagu muransan yahay ayaa bogaadiyey dadaalladii ugu dambeeyey ee Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada, duubabka dhaqanka, bulshada rayidka iyo Beesha Caalamka ee la xiriiray xal ka gaarista khilaafka jira.
“Wuxuu ku wargelinayaa Guddiga, dhammaan dhinacyada siyaasadda in uu guddigu diyaariyey habraacyadii doorashada ee loo baahnaa, una diyaarsanyahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda dalka, waafaqsanna heshiiskii siyaasadeed ee ka soo baxay Golaha Wadatashiga Qaran 17kii Sebteembar 2020” ayaa lagu yiri Qoraalka.
Hoos ka Akhriso War-saxaafadeedka kasoo baxay Guddiga doorashada dalka.
Kenya oo War lama filaan kasoo saartay Warbixintii Guddiga IGAD, xili…